U-Godric Gryffindor ungomunye wabalingiswa endabeni yomlingo uGarry Potter. Ungumlumbi, umsunguli wesikole esibizwa ngokuthi "Hogwarts" - indawo lapho bonke abahlakaniphile abasha nabaloli beqeqeshwa khona, uphawu lwesibindi nesibindi. Phakathi kwabasunguli besikole ngokwabo kanye namakhono: uNkulunkuluric Gryffindor, Salazar Slytherin, kanye noCandida Kogtevran noPenelope Puffenduy.
Ulwazi olujwayelekile mayelana nomlingisi
I-magician yazalwa emgodini ka-Godric, kamuva owabizwa ngegama lomlingo. Izimfanelo eziyinhloko uGryffindor azibaluleka kubantu ziyisibindi nesibindi, ngakho ingonyama ikhethiwe njengophawu lobuhlakani. Bonke abafundi bavunyelwe ukuqeqeshwa ngezimfanelo ezifana nesibindi namandla, ukulungele ukuzidela ngenxa yenhloso enhle.
Umlingiswa awuboniswa kumafilimu e-Potter, kodwa ukhulunywa ngokuphindaphindiwe ezincwadini: engxenyeni yesibili "I-Chamber Chamber" futhi ikakhulukazi ekugcineni - "The Deathly Hallows". UHarry Potter ekuqaleni komlando wegama lefilosofi wayengabaza ukuthi kufanele atadishe esikhungweni se "Gryffindor", kodwa ngenkathi elwa ne-monster - basilisk, engxenyeni yesibili ye-saga, udonsa inkemba ka Godric Gryffindor ngaphandle kwesiqephu sakhe, okubonisa ukuthi uqinisile, Yikuphi umfundi okubonise egameni lokulondoloza lesi sikole. Yilolu buci olwalubaluleke kakhulu ngumsunguli we-faculty.
Umsunguli wesikole somlingo
U-Godric Gryffindor waphila cishe eminyakeni eyinkulungwane edlule (cishe 990). Ibizo elithi Godric livame ukusetshenziswa emanvelweni ngama-knights ephakathi. Ukuhunyushwa kwegama kusuka Old English - Ukubusa noNkulunkulu. Imibono yakhe nezinkolelo zakhe zakha umqondo wesibindi nobuhle phakathi kwabafundi be-faculty yeGryffindor ochungechungeni lwezincwadi zikaHarry Potter. Encwadini ungathola igama lesibili le-faculty - "knightly".
U-Godric Gryffindor uyaziwa nangokudala i-Hat magic ehambisa abafundi emandleni, ephindaphinda ebonakala encwadini nakwimabhayisikobho mayelana namadizadi. Umlumbi wayenenkemba yakhe, okwakufaka kuyo i-ruby enkulu. Lesi sikhali sasibulala i-basilisk egumbini eliyimfihlo, umlingisi oyinhloko - umlandi osemusha uHarry Potter. U-Godric Gryffindor wadala leli thuluzi, njengesihe, ukusiza hhayi kuphela iGryffindors weqiniso, kodwa isikole sonke. Ngakho-ke, inkemba yemilingo ingathola kuphela iqhawe elizinikezele, elingenhloso yokuphishekela udumo, ingcebo namandla.
U-Godric Gryffindor wayengumphikisi ocacile wokuqeqeshwa kwezingcweti kuphela "ezihlanzekile". Wathatha umnyango wakhe emndenini wezingane eziningi emndenini wakwaMuggle, okwakuyisizathu sokungqubuzana phakathi kwakhe kanye nenhloko yeSlytherin. Salazar kwesokunxele Hogwarts nezinhloso okubi kakhulu. Kusukela ngaleso sikhathi, phakathi kwama-faculty, kukhona umzabalazo wokulwa nokuphikisana kuzo zonke izinselelo ezingenzeka. Abafundi "Gryffindor" bangabantu abanomusa, abanesibindi, abakulungele ukusiza noma ubani osenkathazweni. Abafundi be "Slytherin" bahlukaniswa ngobuqili nobuqili, isifiso sokuba ngowokuqala kukho konke.
Umlingiswa womsunguli wesikhathi esidala wesikole waziwa kubalandeli baka "Harry Potter" kuphela kusukela ezincwadini zikaDow. Rowling, kumafilimu ayisikhombisa mayelana nemilingo kwakungekho izigcawu lapho u-Godric Gryffindor azovela khona. Umlingisi owayengadlala "i-Gryffindor eyinhloko", ngenxa yalokho, wakhethwa futhi wayengekho. Enethiwekhi kunemisebenzi yokudala yabalandeli, lapho ungabona khona isithombe se hero. Encwadini uchazwa njengendoda ekhuthele futhi enesibindi enezinwele ezimvu namahlo aluhlaza.
Ukuzilibazisa yiyona ethandwa kakhulu - noma yiluphi uhlobo lokuncintisana, i-duel. Umlingiswa ulawulwa hhayi nje ngezimfanelo ezifana nesibindi nesibindi, kodwa futhi ubuhlobo nobumnandi kwabanye. Kuyamangalisa ukuthi umngane omkhulu we-Godric wayenguSlytherin - ama-natures amabili aphikisana ngokuphelele nakho konke.
Abasunguli abane bezikole zemilingo "Hogwarts", kuhlanganise noGryffindor, baqala ukuyidala ekuqaleni kwekhulu le-11. Umbono wezombusazwe wawusekelwe ekubhalisweni kwezingane ezivela emindenini ehlukahlukene. Ngomngane wabo uSalazar Slytherin, abavumelani nalokhu mbono, ngoba labo abagcina ukukholelwa ukuthi isikole sobuthakathi nemilingo kwakuyindawo kuphela yamagilisi angenalutho. I Hat ihambisa lokhu encwadini. Amagama ale ngoma atshela abafundi ukuthi igama alibalulekile, kodwa kuphela izenzo ezinesibindi, ukubonakaliswa kwesibindi nobuqhawe. Kulesi simiso, inhloko ye-faculty ikhethiwe abafundi. Izinto zemilingo zegatsha le "ngonyama" lesikhungo semilingo zaba yiNkemba yeMilingo ne-Talking Hat.
Le ncwadi ayisho ukuthi uGryffindor washona kanjani. Isithombe se-magician sinesisindo sesishiyagalombili esakhiweni esithi "Hogwarts", eduze kwekamelo lokudweba labafundi be-faculty of the creator.
Inkemba kaMilly Gryffindor yenziwe ngamabhogi ngokusho kwezinganekwane eminyakeni engaba ngu-100 edlule. Isici esiyingqayizivele amandla omlingo abaphathi abanikeza isibhamu. Inkemba yesiliva ihlotshwe ngamatshe ne-ruby enkulu ekhanyayo. Igama lomlingo liqoshwe ngaphansi kwe-hilt yesibhamu. Ikakhulukazi i-Godric, inkemba yahlanganiswa yinkosi yaseRanguk the First, eyaziwa ngobuciko bakhe obuhle emnyama.
Ngokusho komlando, lapho umsebenzi usuphelile, umkhandi wensimbi wayefuna ukugcina inkemba yakhe, eyaqala ukutshela ukuthi u-Godric usebiwe umsebenzi wakhe. Umlumbi wazivikela ekuhlaselweni kwezinceku zenkosi yama-goblins ngosizo lwendoda yakhe yemilingo, ngaphandle kokubulala abaphikisi. Ngemva kwalokhu, izinceku zatshele uRangook ukuthi uma ezama ukuphinda futhi akhiphe inkemba eGryffindor, wayezomemezela impi yangempela ngokumelene nalezi zithwala. Isibhamu sabuyela kumnikazi, kodwa umkhandi wensimbi wamcasula waze wafa. Ngakho-ke, ngisho nakulo ifilimu, umuntu angabona umzila wesifiso sokubamba izikhali zabo.
Abadlali befilimu "Isiqhingi Esihleliwe". Ifilimu yaseBondarchuk "Isiqhingi Esihlala Kuyo"
Isenzo uye (kwadingeka) ngesiNgisi
Self-yokululama phansi "U-Eunice Horizon": emihle nemibi, imfundo, ukufakwa